DEG DEG: Gabar ka tirsanayd howlwadeennada Xafiiska RW Rooble oo ku dhimatay qaraxii Ceel Gaabta (Maxay ku qaybsanayd?) | Hadalsame Media
Home Wararka DEG DEG: Gabar ka tirsanayd howlwadeennada Xafiiska RW Rooble oo ku dhimatay...
(Muqdisho) 25 Sebt 2021 – Gabar ka mid ahayd howlwadeennada gaarka ah ee Xafiiska RW Rooble ayaa la xaqiijiyey inay ka mid ahayd dadkii ku dhintay qaraxii Imbaradooriyadda Ceel Gaab.
”Ilaah ha u naxariisto Hibaaq Abuukar oo ka tirsaneyd Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha oo ka mid aheyd dadkii saaka ku dhintay weerar bahalnimo ah oo argagaxisadu ay ka sameeyeen bar koontorool oo ku taalla Isgoyska Ceel Gaab,” ayuu soo qoray Afhayeenka Xukuumadda Ibraahim Macallimuu.
”Allaha u naxariisto dhamaan dadka aan waxba galabsan ee ku dhintay qaraxaasi fuleynimada ah. Hibaaq waxa ay aheyd gabar firfircoon oo ka mid aheyd tiirarka xafiiska gaar ahaan qeybta Arimaha Haweenka.
”Qoyska Ilaah Samir ha ka siiyo . Iyada iyo intii kale ee xaqdarada ku dhimtayna naxariisto janno Eebe ha siiyo.” ayuu raaciyey Macallimuu.
Qaraxan ayaa waxaa ku dhintay kuna dhaawacmay dad badan oo rayid ahaa oo ku sugnaa goobta uu qaraxu ka dhacay oo ah meel aad u mashquul badan.
Previous articleCiidamada Kenya oo dadka u faa’iideeyey farsamo aad looga baahan yahay Somalia + Sawirro
Next article”Qaraxu ma sii soconayaa haddii aan la helin Wasiir Amni oo la isku raacsan yahay?!!” – Dad ka falceliyey qoraalka Cali Yare